ရန်ကုန် မြို့တော် သင်္ကြန် အကြတ်နေ ဗုံး သုံးလုံးပေါက်၊ ရေကစား သည့် မိန်းကလေးငယ် အများစု သေဆုံး | မောက္ခ
ရန်ကုန် မြို့တော် သင်္ကြန် အကြတ်နေ ဗုံး သုံးလုံးပေါက်၊ ရေကစား သည့် မိန်းကလေးငယ် အများစု သေဆုံး
မြန်မာ နှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန် အကြတ်နေ့ ညနေ သုံးနာရီ ကျော် အချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီး ကန်ပတ်လမ်းရှိ X 2o ရေကစား မဏ္ဍပ် တွင် ဗုံးသုံးလုံး ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။ ဗုံး ပေါက်ကွဲ မှုကြောင့် လူ ၉ ဦး သေဆုံးပြီး လူ ၁၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာ ရရှိ သွားသည် ဟု အစိုးရ သတင်း ဌာနက ပြောဆို သော်လည်း၊ ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး တာဝန်ကျ ဆရာဝန် တစ်ဦးက သေဆုံးသူ နှစ်ဆယ် ကျော်ပြီး၊ ရေကစား နေသည့် မိန်းကလေး အများစု ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ကြောင့် မြန်မာ စစ်အစိုးရ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ ဝင်များက ရေကစား မဏ္ဍပ်များ ကို ချက်ခြင်း ပိတ်ခိုင်းပြီး၊ သင်္ကြန် နောက်ဆုံးနေ့ ဖြစ်သည့် ယနေ့ အတက်နေ့ တွင်လည်း ရေကစားခွင့်များ ပိတ်မည် ဟု မဏ္ဍပ် စီစဉ်သူ တစ်ဦး ကဆိုသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့သည့် X2o မဏ္ဍပ် သည် နှစ်စဉ် ရေပက် မဏ္ဍပ် ဆောက်လုပ်သည့် ရန်ကုန် မြို့၏ နာမည်ကျော် မဏ္ဍပ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး၊ ယခင်က အင်လျှားလမ်း တွင် နှစ်စဉ် မဏ္ဍပ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ် ကန်ပတ် လမ်းတွင် ဆောက် လုပ်သည့် မဏ္ဍပ်များ အနက်လည်း အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ဗုံးပေါက်ကွဲ ခြင်းသည် နေပြည်တော် သင်္ကြန် စည်ကားမှု မရှိပဲ ရန်ကုန် သင်္ကြန် အလွန် စည်ကားခြင်းကို မနာလို ဖြစ်သည့် စစ်ခေါင်းဆောင် များက ဗုံးဖောက်ခွဲရန် စီစဉ်ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု ရန်ကုန် မြို့ ခံတို့ ကပြောကြသည်။ အစိုးရဘက် ကလည်း ပြည်ပ အခြေစိုက် National Council of Union of Myanmar (NCUM) အဖွဲ့ လက် ချက်လို့ စွတ်စွဲသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲပြီး နောက်ပိုင်း တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များက X2o မဏ္ဍပ် အနီးရှိ ရေကစား နေသူ အချို့ နှင့် ၀မ်းရေး အတွက် အသက်မွေး နေသူ အချို့ ကို လိုက်လံ ဖမ်းဆီးသည် ဟု သိရသည်။ ဗုံးပေါက်ကွဲ မှု သတင်း အား မြန်မာ့ ရုပ်မြင်သံကြားမှ ညနေ ခြောက်နာရီတွင် ကြားဖြတ် သတင်း လွှင့်ထုတ် သွားခဲ့သည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲ မှုကြောင့် မင်္ဂလာ တောင်ညွှန့်မယက ဥက္ကဌ နှင့် ဒုရဲ အုပ် တစ်ဦး ပြင်းထန် စွာ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိ သွားသည်။ ဗုံးပေါက်ကွဲ မှု မတိုင်ခင် တစ်ရက် အလို သင်္ကြန် အကျနေ့ ညနေကတည်းက ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး ရှိ လူနာဆောင်များ နှင့် အရေးပေါ်ကုသခန်းများ အား အာဏာပိုင်များက ရှင်းလင်း ထားခိုင်းသဖြင့် ဆေးရုံကြီး ဆရာဝန် အချို့ ကတော့ ထို ဗုံးပေါက်ကွဲမှု မှာ စစ်အစိုးရ ၏ လက်ချက် ဟု ယူဆကြသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲပြီးနောက် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မျှော်စင်ကျွန်း ၀င်ပေါက် လမ်းဆုံမှ နေ၍ ဦးထောင်ဗိုလ် အ၀ိုင်းထိ လမ်းများ ပိတ်ထားသည်။ ဗုံး ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ကန်ပတ် လမ်းတွင် ရေကစားနေ သူတို့မှာ ကမ္ဘာပျက်မတတ် ဖြစ်သွားခဲ့သည်။
ဗုံးကွဲမှုကြောင့် သေဆုံးသူ နှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ များမှာ မိန်းကလေး အများစု ဖြစ်ကြသည် ။
Photo Ref : Phoejel
This entry was posted in ပညာရေးအတွေးအခေါ် and tagged မောက္ခ ဆရာ သမဂ္ဂ ပညာရေး EI မြန်မာ ပညာရေး Burma Myanmar Education ရံပုံငွေ မောက္ခပညာရေးမဂ္ဂဇင်း အခွင့်အရေးကလေးများ ဆရာဆရာမ ကျောင်းသား သင်ကြားရေး ပညာရေး ကျောင်း ကျောင်းသူ. Bookmark the permalink.
← ရှဉ့်ကလေးတွေရဲ့ သတ္တိ
ယီမင် နိုင်ငံမှ ၁၂ နှစ် အရွယ် သတို့သမီးလေး သွေးထွက်လွန် သေဆုံး →
fend off, revoke
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပညာရေး (အပိုင်း ၁) အယူအဆနှင့် နည်းစနစ်
မြန်မာ ကလေးသူငယ် သုတစာပေ
Ubuntu 11.10 အသစ်မှာ လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ် တွေ တင်မယ်
ကျေးလက်ဗဟိုပြု ပညာရေး ဖြစ်ဖို့လို (ပညာရေး အင်တာဗျူး)
“ကော ဆော် နော” ပညာရေး (ဆရာ စောအောင်သန်းဝေနှင့် အင်တာဗျူး)
အနုရသဘာသာရပ် သင်တန်းဆရာမနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
မြို့ပြ ယဉ်ကျေးမှုများ ထွန်းကားလာခဲ့ခြင်း ရှေးဟောင်း-ခေတ်သစ် ဂရိ ယဉ်ကျေးမှု
နိုင်ငံရေးသမားကောင်း အမြန် အလိုရှိသည်။
တရုတ် ရှေးဟောင်း-ခေတ်သစ် ယဉ်ကျေးမှု
နျူကလီးယား စွမ်းအင် – ထောက်ခံမလား —– ကန့်ကွက်မလား